DeviceRank: Qiimaha Kumbuyuutarka Qalabka Lagu Kordhiyo iyo Ka Qaybgalka Khiyaanada | Martech Zone
Shirkadaha ayaa lacag aad u fara badan ku bixinaya horumarinta barnaamijka mobilada. Meel kasta oo ay saamiyadu sareyso, khiyaanada ayaa u muuqata inay raacayso. Sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka QalabkaRank, Mobile App rakibida iyo khiyaanada hawlgelinta ayaa ku kici doonta xayeysiistayaasha ilaa $ 350 milyan sanadka 2016
AppsFlyer ayaa Xaaladda Moobilka App Ku rakib & Khiyaano Howlgelinta waxay ku saleysan tahay tikniyoolajiyadda shirkadda "DeviceRank ™" - xalka ugu horreeya ee ka hortagga khayaanada ee wershadaha si loo aqoonsado oo looga saaro khayaanada heerka qalabka - ayna daboosho 500 milyan oo qalab.
Soo Degso Barnaamijka 'AppsFlyer Study'
Saadaashaasi waxay ku saleysan tahay nashaadaadyo khiyaanooyin kala duwan ah, labadaba waa la xaqiijiyay oo laga shakiyay:
Khalad-u-sheegashada xogta gujinta khiyaanada.
Rakibaadaha lacag bixinta ah ee aaladaha been abuurka ah.
Khiyaano iyo dhacdooyin ku-dhex-dhexaad ah barnaamijka.
Beegsiga beegsiga iyo dib u habeynta khiyaanada.
Juquraafi ahaan, dalalka leh heerarka ugu sarreeya ee barnaamijyada rakibidda iyo ku lug lahaanshaha khiyaanooyinka xayeysiinta, markii ay wacyigelinayaan dadweynaha guurguura, waa Jarmalka, Australia, Shiinaha, Kanada iyo Boqortooyada Midowday, oo ay ku xigaan Mareykanka, Ruushka, iyo Faransiiska. Cilmi baarista ayaa muujisay in khaa'imiintu isku dayaan inay bartilmaameedsadaan dalal gaar ah iyadoo kuxiran lacagaha ay ka heli karaan been abuurka goobtooda si ay u sameeyaan khiyaano.
Dalalka ugu kharashka badan-rakibid iyo kharash-fal-celin kasta waxay leeyihiin heer khiyaano sare, halka gobollada mushaharkoodu aad u hooseeyo - oo ay ku jiraan Indonesia, India, Brazil, Vietnam, iyo Thailand ay leeyihiin qiyam khiyaano hooseeya.
Ku saabsan DeviceRank
DeviceRank ayaa ah tiknoolajiyaddii ugu horeysay ee mobilada tignoolajiyada ee warshadaha si loo aqoonsado oo looga hortago khayaanada heerka qalabka. Tiknoolajiyaddan gaarka ah waxay adeegsaneysaa horumarkii ugu dambeeyay ee xogta weyn iyo barashada mashiinka si loogu bixiyo 3x ilaa 12x difaac ka wanaagsan xalka heerka warshadaha.
Sidaan ku aragnay daraasaddeena caalamiga ah, dadka wax khiyaameeya iyo kuwa wax isdaba mariya ayaa sii kordhaya oo sii kordheysa, iyagoo xayeysiiya siinaya inay bixiyaan labada rakib iyo ka-qaybgalka barnaamijka. Qalabka loo yaqaan 'DeviceRank' wuxuu qaadaa qaab ka geddisan qaabab kala geddisan, wuxuu ka gooyaa khiyaanada meesha ay ka socoto wuxuuna ku darayaa daahfurnaan ku aaddan warshadeena si loo ilaaliyo xayeysiistayaasha, la-hawlgalayaashayada iyo dhammaan suuqa. Oren Kaniel, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha guud ee AppsFlyer.
Qalabka DeviceFank ee AppsFlyerTM tikniyoolajiyaddu waxay u shaqeysaa si lamid ah Dhibcaha Dhibcaha, aqoonsashada dabeecadda su'aal ka taagan tahay iyo bixinta difaac sare. Waxay ka faa'iideysaneysaa algorithm xog-ku-shaqeysi weyn oo xog leh si loo dhiso qarsoodi, qiimeyn badan oo qalab kasta oo mobiil ah.
Qalab kasta waxaa lagu qiimeeyaa miisaan ka yimid C (khiyaano), ilaa B, A, AA iyo AAA. Qalabka leh qiimeyn “C” ah ayaa si otomaatig ah looga reebay rakibidda loo aaneeyay ee AppsFlyer iyo Analytics. Iyadoo in kabadan 1.4 tiriliyan oo isdhaxgalka taleefannada gacanta lagu diiwaan geliyey keydkeena gudaha shanti sano ee lasoo dhaafay, iyo 98% dhammaan aaladaha moobaylka ee adduunka oo dhan horeyba loo qiimeeyay, DeviceRank wuxuu matalaa tiknoolajiyadda kahortagga khiyaanada adduunka.
Intaa waxaa sii dheer, qaab dhismeedka gaarka ah ee DeviceRank iyo barashada mashiinka ayaa u oggolaanaya keydka xogta iyo algorithms inay koraan, bartaan oo ay la qabsadaan markay aaladaha cusub ee mobiladu ku soo galaan internetka, isdhexgalka cusub ayaa la diiwaan geliyay iyo qaababka kaqeybgalka isticmaalaha ayaa is beddelaya
Tags: appsflyeraaladhawlgelinta barnaamijka moobilkakhiyaanada hawlgelinta barnaamijka moobilkakhiyaano app mobilebarnaamijka mobilada ku rakib khiyaanorakibaadda barnaamijka mobilada